Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 85
Dalka Baarma oo ah mid kamid ah dalalka sida arxan darrada ah loogu dhibaateeyo dadka Muslimiinta ayaa waxaad moodaa in Muslimiinta ku nool ay haatan cagta saareen wadada Cizziga iyo sharafka oo ah Jihaadka, waxaana dhalinyarada dalkaas ay bilaabeen iney tababartaan. Gobollada qaar ayaa waxaa ka dhacaya dagaallo kudhof ka dhaqaaq ah oo ay qaadayaan Dhalinyarada Muslimiinta, waxaana ay weerarayaan ...	Read More »
Ciidamo aad u farabadan oo katirsan Xukuumadda Kaabul oo isku dhiibay Imaarada Islaamiga ah.
Imaarada Islaamiga ah ee Dhaalibaan ayaa xaqiijisay in ay isasoo dhiibeen ciidamo aad u farabadan oo katirsan Booliiska iyo milliteriga xukuumadda taagta daran ee Shisheeyuhu ka dhiseen dalka Afqaanistaan wixii ka dambeeyay markii ay rideen Imaarada Islaamiga ah ee Dhaalibaan. Imaarada ayaa war kooban oo ay sooo saartay waxay ku sheegtay in 100 Askari oo ka kala tirsan Booliiska iyo ...	Read More »
Wararka ka imaanaya magaalada Al-Qudus ee dhulka Filastiin ayaa ku waramaya in tobanaan katirsan dadka Yahuudda ah oo ay la socdaan ciidamada Booliiska mamaulka Natanyahu ay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsaa. Kooxaha Yahuudda oo u socodo koox koox ayaa isku dayaya iyagoo wata ciidamo ilaalo ah iney galaan gudaha Masjidka islamarkaaana ay ku oogaan cibaadaadkooda baadhilka ah, balse ...	Read More »
Jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala dalka Suuriya qaar kamid ah ayaa ku dhawaaqay qazwo loogu magac daray Yowmu Caashuura taas oo qorshaheeda uu yahay in Mujaahidiintu kula wareegaan Jabalul Akraad ee gobolka Allaadiqiyah. Barta Telegramka ay ku leedahay Jabhadda Fatxu-Shaam oo ah hormuudka Qazwadan ayaa lagu baahiyay sawirada Ciidamada Mujaahidiinta oo isku diyaarinaya duulaanka, islamarkaana wata hubka noocyadiisa kala ...	Read More »
Jamaacada Jundul Aqsaa oo ku biirtay Jabhadda Fatxu-Shaam.
Saaxada dalka Suuriya ee barakeysan ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan iney isku biiireen labo kamid ah Jamaacaadka Jihaadiga ah ee leh taariikh dahabi ah oo ku aadan la dagaalanka Nidaamka MUjirmka Bashaar Al-Asad. Jamaacada Jundul Aqsaa oo kamid ah jamaacaadka ugu weyn ee Suuriya ayaa go’aansatay iney ku biirto Jabhadda Fatxu-Shaam, waxaana baraha Internetka lagu baahiyay bayaanka labada dhinac ...	Read More »
Mujaahid Filastiini ah oo weerar ku qaaday Yahuud ku sugneyd magaalada Qudus.
Barqinamdii maanta ayaa Mujahid Filastiini kaligii duule ah waxa uu weerar ku qaaday Dad Yahuud ah oo ku sugnaa magaalada Al-Qudus ee Yahuudu xooga uga heystaan Muslimiinta. Mujaahidka kaligii duullaha ahaa oo hubeysnaa ayaa Rasaas ooga uga qaaday dad Yahuud ah, isagoona halkaas ku dilay 2 qof halka uu dhaawacyo xoogan gaarsiiyay 6 Ruux oo kale oo uu ku jiro ...	Read More »
Sheekh Abuu Faraj wuxuu ahaa Madaraso soo saartay Jihaadiyiin badan.
Kalimad soconeysa qadar todobo daqiiqo iyo secconno ah islamarkaana uu jeedinayo hogaamiye sare oo katirsan Jabhadda Fatxu-Shaam ayay baahisay mu’assasada Jihaadiga ee Al-Bunyaan. Kalimadan oo ah baroor diiq iyo taczi ku aadan istish-haadkii dhawaan ku yimid Sheekh Abil Faraj Al-Misri oo maalintii Isniinta kuna beegenyd 2 Muxaram magaalada Jizru-Shquur ay ku duqeysay diyaarad ay leedahay dowladda Maraykanka ayaa waxaa jeedinaya ...	Read More »
Diyaarad uu leeyahay Ciidanka Yahuudda oo ku burburtay meel u dhow Qazza.
Maalintii shalay oo arbaco ah waxaa diyaarad uu leeyahay Ciidanka Yahuudda ay ku burburtay meel u dhow magaalada Qazza, iyadoona uu khasaare uu soo gaaray duuliyeyaashii iyo ciidankii saarnaa diyaaradda. Diyaaradda burburtay oo nooceedu yahay F16 ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu dab ka kacay iyadoo isku dayayso iney ku degato garoon ciidan oo ku yaala meel u dhow magaalada ...	Read More »
Maamulka Yahuudda oo qorsheynaya inuu is hor taago Markab ku wajahan Qazza.
Iyadoo la filayo in saacadaha soo socda uu Qazza gaaro markab loogu magac daray Zaytuuna oo ay haween iskood isku xilqaamay ku doonayaan iney gurmad ku gaarsiiyaan magaalada Qazza ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ciidamadda Badda ee Yahuuddu doonayaan iney gebi ahaanba is hortaagaan markaabkaas. Markabka oo loogu magac daray Zaytuuna ayaa kasoo shiracday dalka Spain, waxaana dhowr ...	Read More »
Wararka ka baxa idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waxaa lagu soo gudbiyaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Caalamka. Halkan ka dhagayso War-duhur-04-10-2016	Read More »